Maalinta: Febraayo 4, 2018
Baabuurta Cirifka Baabuurta Barta Mar dambe
Xarunta muhimka ah ee xilliga qaboobaha iyo dalxiiska dabeecadda ayaa weli muujineysa saameynta lodos ee daran ee Uludağ. Lodos waa la xayiray Jimcaha iyo Sabtida sababta oo ah adeegga gawaarida fiilada lama qaban karo maanta. Kun rakaab ah 500 saacadiiba [More ...]
Shaqada Tamarta ee Kanal Istanbul La bilaabay
BEDAŞ, oo bixiya korantada garoonka diyaaradaha ee 3, ayaa bilaabay inuu u shaqeeyo Kanal Istanbul. Maareeyaha Guud Yiğit ayaa yidhi, hazırlık Waxaan inbadan isku diyaarineynay. Waxaan bilaabay inaan ka fikirno Başakşehir iyo Arnavutköy. ” Waxaa caan ah oo loo yaqaan 'Mashruuc Crazy' [More ...]
Ololaha dhibaatooyinka gaadiidka
Muwaadiniinta sheeganaya in sababta oo ah dhismaha buundooyinka degmada Fooda ee Izmir, waxay ahayd inay socod lug ah ku socdaan hal kiiloomitir si ay u gaaraan basaska laga soo rarayo İZBAN ee tareenka Hatundere-Foça. [More ...]
Si lama filaan ah hortiisa eey eey qaldamay sababtuna tahay joojinta baska magaalada oo faragalin ku sameye darawalka ayaa helay abaalmarino bulshada rayidka ah. Baska u jooji eeyga dhaawacmay lana ogeysii mas'uuliyiinta oo muuji xasaasiyad 2017 [More ...]
Xarunta Sare ee Logistics iyo Karsarka Meel Wanaagsan
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, iyo Faruk Ozlu, Wasiirka Sayniska, Warshadaha iyo Teknolojiyadda, ayaa booqday Kars Governorate. Barnaamijyada ka dambeeya Ardahan, wasiirradii u yimid Kars iyo Özlü iyo Arslan, oo ah gudoomiye Rahmi [More ...]
Maanta taariikhda: 4 Febraayo 1935 Atatürk wuxuu yiri, asi Waxyaabaha koritaanka iyo horumarka